Momba anay - Zhejiang Baolai Group Co., Ltd.
Zhejiang Baolai Group Co., Ltd. (Marika: Glazzy) dia nanam-pahaizana manokana amin'ny famokarana solomaso nandritra ny 20 taona mahery. Ny orinasanay dia iray amin'ireo orinasam-piasa mitarika amin'ny asa-maso eto Shina, manana ny foibeny ao amin'ny faritra mpamokatra solomaso lehibe indrindra any China - Taizhou Linhai.
Afaka mamokatra karazana solomaso rehetra izahay afa-tsy ny masom-pifandraisana, ny andalana vokatra lehibe misy anay dia: Sunglasses, frame Optical, solomaso famakiana, solomaso fanatanjahan-tena, solomaso acetate, sns ...... Miara-miasa amin'i Disney, Walmart, CocaCola, Unilever izahay. , Lipton sns ..... Azonay aseho ny fanaraha-maso ny ozinina rehetra momba ny fanovozan-kevitrao raha mila izany ianao. Manodidina ny 8 taona ny fanondranana traikefa, nanangana sampana varotra matanjaka mifaninana sy matihanina izahay, ekipa mpamolavola mahay, ekipa QC / QA tompon'andraikitra.
Manana tanjona iray isika rehetra: manome ny vokatra tsara indrindra ho an'ireo mpanjifantsika mahafinaritra rehetra. Miaraka amina karazana vokatra avo lenta sy lafo vidy ary endrika kanto, manana fifaninanana matanjaka eo amin'ny tsenanay izahay. Mifantoka amin'ny fanaraha-maso kalitao koa izahay, ny serivisy ho an'ny mpanjifa, amin'ny fandefasana ara-potoana ary mandray izany ho antony lehibe hanatsarana ny fahaiza-manao amin'ny fifaninanana eo amin'ny tsena manerantany. Mba hananganana sanda ambony indrindra ho an'ny mpanjifantsika dia tadiavinay tsy tapaka. Tongasoa eto hitsidika ny orinasa. Manantena izahay fa afaka manana fotoana hananganana fifandraisana ara-barotra miaraka aminao ary hametraka fiaraha-miasa maharitra.